I-7 Automated Workflows Ezoshintsha Igeyimu Yakho Yokuthengisa | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 10, i-2021 Lwesine, Disemba 9, 2021 Chintan Jain
Ukumaketha kungaba nzima kunoma yimuphi umuntu. Kufanele ucwaninge amakhasimende akho owaqondise, uxhumane nawo ezinkundleni ezahlukene, uphromothe imikhiqizo yakho, bese ulandelela uze uvale ukuthengisa. Ekupheleni kosuku, kungase kube sengathi ubugijima i-marathon.
Kodwa akudingekile ukuba kube nzima, mane uguqule izinqubo.
I-automation isiza amabhizinisi amakhulu ukuthi ahambisane nezidingo zamakhasimende futhi amabhizinisi amancane ahlale efanele futhi encintisana. Ngakho-ke, uma ungakawamukeli ama-automation wokuthengisa, manje yisikhathi. Vumela isofthiwe ezenzakalelayo inakekele imisebenzi edla isikhathi ukuze ukwazi ukugxila emisebenzini ebalulekile.
Kuyini Ukumaketha Kokuthengisa?
I-Marketing automation isho ukusebenzisa isofthiwe ukwenza ngokuzenzakalelayo imisebenzi yokumaketha. Imisebenzi eminingi ephindaphindwayo ekukhangiseni ingenziwa ngokuzenzakalelayo: ukuthunyelwa kwenkundla yezokuxhumana, ukumaketha nge-imeyili, imikhankaso yezikhangiso, kanye nemikhankaso yokudonsa.
Uma imisebenzi yokumaketha izenzekela, umnyango wokumaketha usebenza kahle futhi abakhangisi banganikeza ulwazi lomuntu siqu kumakhasimende. I-automation yokuthengisa iholela ekwehleni kwezindleko, ukukhiqiza okuphezulu, nokwanda kokuthengisa. Kukwenza futhi ukuthi ukhulise ibhizinisi lakho ngezinsiza ezimbalwa.
Nazi izibalo ezibalulekile ezimbalwa zokuzenzakalela kokumaketha.
75% kuzo zonke izinkampani zamukele i-marketing automation
480,000 amawebhusayithi okwamanje sebenzisa ubuchwepheshe be-marketing automation
63% yabathengisi bahlele ukukhulisa izabelomali zabo ezishintshayo zokumaketha
91% Abadayisi bakholelwa ukuthi i-marketing automation ikhulisa impumelelo yemikhankaso yokumaketha ku-inthanethi
Ukusebenzisa i-automation yokumaketha kuholela ekwenyukeni okungu-451% kwabahola abaqeqeshiwe–ngokwesilinganiso
Uma wenza ukumaketha ngokuzenzakalela, uyakwazi ukukhomba amakhasimende ngokuqondile, futhi isabelomali sakho sokumaketha sisetshenziswa ngobuhlakani nangempumelelo. I-Marketing automation isebenza kuwo wonke amabhizinisi, futhi nazi izinqubo zokumaketha ezingenziwa ngokuzenzakalela ngethuluzi lokuhamba komsebenzi.
Ukuhamba komsebenzi 1: I-Lead Nurturing Automation
Ngokocwaningo, u-50% wemikhondo oyikhiqizayo ufanelekile, awukakalungeli ukuthenga noma yini okwamanje. Bangase bajabule ngokuthi ungakwazi ukubona amaphuzu abo ezinhlungu futhi uvulekele ukuthola ulwazi olwengeziwe. Kodwa abakakulungeli ukuthenga kuwe. Eqinisweni, u-25% kuphela wabaqondisi abalungele ukuthenga imikhiqizo yakho nganoma isiphi isikhathi, futhi lokho kuwukuba nethemba.
Mhlawumbe uthole ukuhola ngamafomu okukhetha ukungena ku-inthanethi, ukufuna ukuthengisa, noma ithimba lakho labadayisi lithole amakhadi ebhizinisi embukisweni wezohwebo. Ziningi izindlela zokwenza umkhondo, kodwa nansi into: ukuthi abantu bakunike ulwazi lwabo akusho ukuthi bazimisele ukukunikeza imali yabo.
Okuholela ekufuneni ulwazi. Abafuni ukukunika imali yabo bengakalungeli. Ngakho-ke, into yokugcina okufanele ngabe uyayenza ukubatshela ukuthi, “Heyi inkampani yethu inemikhiqizo emihle, kungani ungayithengi!”
Ukukhulisa umthofu okuzenzakalelayo kukuvumela ukuthi uhambise umkhondo ohambweni lomthengi ngejubane lawo. Uxhumana nabo, uthole ukwethenjwa kwabo, ukumaketha imikhiqizo yakho, bese uvala ukuthengisa. I-automation ikusiza ukuthi uthuthukise futhi ulondoloze ubudlelwano nabangase babe khona futhi uhola ngaphandle kwemizamo yokuthengisa edinga abasebenzi. Usebenzisana namathemba namakhasimende kuzo zonke izigaba zohambo lwabo lokuthenga.
Ukuhamba komsebenzi 2: I-imeyili Marketing Automation
Ukumaketha nge-imeyili kusiza abadayisi bakhe ubudlelwano nabantu abangaba khona, abaholayo, amakhasimende akhona, ngisho namakhasimende adlule. Kudala ithuba lokuthi ukhulume nabo ngokuqondile ngesikhathi esibalungele.
Inani labasebenzisi be-imeyili lilinganiselwa ukuthi lingafinyelelwa I-4.6 billion ngo-2025. Ngabasebenzisi abaningi be-imeyili, kulula ukubona ukuthi kungani imbuyiselo yokutshalwa kwezimali evela ekukhangiseni nge-imeyili inkulu. Ucwaningo lubonise ukuthi kuyo yonke i-$1 echithwe ekukhangiseni nge-imeyili, isilinganiso sembuyiselo singama-$42.
Kodwa ukumaketha nge-imeyili kungase kuzwakale njengokumosha isikhathi ngoba kuningi okumelwe ukwenze: bheka amathemba, uhlanganyele nawo, makethe imikhiqizo yakho, thumela ama-imeyili, futhi ulandelele. Ukuzenzakalela kungasiza lapha ngokwenza ngokuzenzakalelayo imisebenzi ephindaphindwayo ehlotshaniswa nokuphathwa kobudlelwane bekhasimende, kwenze ukumaketha nge-imeyili kusebenze kahle.
Ithuluzi le-imeyili lokumaketha elizenzakalelayo lingathumela ababhalisile imilayezo efanele, yomuntu siqu, nefika ngesikhathi. Isebenza ngemuva, ikuvumela ukuthi usebenze kweminye imisebenzi ebalulekile. Ungathumela ama-imeyili aqondene nawe kumuntu ngamunye, ukusuka ezivakashini ezintsha ukuya kubathengi abaphindayo.
ukuqhutshwa komsebenzi 3: I-Social Media Marketing Automation
Kunabasebenzisi bezinkundla zokuxhumana abayizigidigidi ezingu-3.78 emhlabeni wonke, futhi iningi labo lichitha imizuzu engu-25 ukuya emahoreni angu-2 nsuku zonke ezinkundleni zokuxhumana. Yingakho abakhangisi abaningi besebenzisa izinkundla zokuxhumana ukukhangisa izinkampani zabo.
Uma usebenzisana namakhasimende kanye namathemba ezinkundleni zokuxhumana, ungakhuluma nawo ngesikhathi sangempela futhi uthole impendulo yawo. Cishe ingxenye yamakhasimende ase-US asebenzisa inkundla yezokuxhumana ukuze abuze ngemikhiqizo namasevisi, ngakho ukuba khona kwenkundla yezokuxhumana okuqinile kubaluleke kakhulu.
Kodwa akwenzeki ukuthi uchithe usuku lonke ezinkundleni zokuxhumana, futhi yilapho okuzenzakalelayo kungena khona. Ungasebenzisa ithuluzi lokumaketha lenkundla yezokuxhumana ukuze uhlele, ubike, futhi uqoqe imibono. Amanye amathuluzi e-automation angabhala ngisho nokuthunyelwe kwezokuxhumana.
Ukumaketha okuzenzakalelayo kwenkundla yezokuxhumana kukhulula isikhathi sakho, kukwenza ukwazi ukuxhumana nabalandeli bakho futhi ubambe izingxoxo eziyiqiniso. Ungakwazi futhi ukusebenzisa imibiko ekhiqizwayo ukuze wenze amasu okuthi uzothumela ini futhi nini.
ukuqhutshwa komsebenzi 4: I-SEM & SEO Management
Cishe unamashumi noma amakhulu abantu oqhudelana nabo, yingakho kubaluleke kakhulu ukukhangisa ezinjinini zokusesha. I-SEM (I-Search Engine Marketing) ingakhulisa ibhizinisi lakho endaweni yemakethe encintisanayo.
I-SEO (Ukuthuthukiswa Kwenjini Yokusesha) isho ukuthuthukisa iwebhusayithi yakho ukuze ithuthukise ukubonakala kwayo kusesho olufanele ezinjinini zokusesha. Uma isayithi lakho libonakala kakhulu emiphumeleni yosesho, ayanda amathuba akho okuheha amakhasimende akhona kanye nakhona ebhizinisini lakho. I-SEM yenza imali ekusesheni kwamagama angukhiye okuhlosiwe, kuyilapho i-SEO isiza ukuguqula nokugcina imikhondo ekhiqizwe amasu e-SEM.
Lapho wenza i-SEM ne-SEO ngokuzenzakalelayo, wehlisa inani lomsebenzi wezandla okufanele uwenze futhi usheshise imisebenzi eyisicefe. Ngenkathi ungeke ukwazi ukwenza ngokuzenzakalelayo yonke inqubo ye-SEM ne-SEO, kuneminye imisebenzi ongayenza ukuze usize ukukhulisa ukusebenza kahle.
Izinqubo ze-SEM kanye ne-SEO ezingazenzakalela zihlanganisa ukukhiqiza izibalo zewebhu, ukuqapha okukhulunywa ngakho komkhiqizo nezixhumanisi ezintsha, ukuhlela amasu okuqukethwe, ukuhlaziya amafayela welogi, isu lamagama angukhiye, nokwakha izixhumanisi. Lapho i-SEM ne-SEO kuhlanganiswe ngokucophelela, bakhiqiza umkhankaso wokuthengisa wedijithali onamandla onemiphumela ebonakalayo.
Ukuhamba komsebenzi 5: Ukuhamba komsebenzi Wokumaketha Okuqukethwe
Lonke uhlobo oluphambili lunento eyodwa eluqhubezela phambili: ingcebo yokuqukethwe okubalulekile nokubalulekile okukuxhumanisa nababukeli. Ukumaketha okuqukethwe kudlala indima ebalulekile emikhankasweni yokuthengisa yedijithali eyimpumelelo.
Kodwa nansi into. Ama-54% kuphela wabakhangisi be-B2B abasebenzisa okuqukethwe ukwakha ukwethembeka kumakhasimende abo akhona. Abanye bavele bazame ukuwina ibhizinisi elisha. Ungasiphazamisi, ukuwina ibhizinisi elisha akukubi, kodwa ucwaningo lubonisa ukuthi u-71% wabathengi uvalwa okuqukethwe okubonakala sengathi ukuthengisa. Ngakho-ke, esikhundleni sokuchitha isikhathi esiningi uthengisela amathemba namakhasimende akhona, okufanele ngabe uyakwenza ukuhlanganyela nabo.
Ithuluzi lokuzenzakalela lokumaketha okuqukethwe lingenza ngokuzenzakalelayo futhi liqondise imisebenzi yokuthengisa ephindaphindwayo yokuqukethwe. Kusiza ukuthuthukisa ukusebenza kwecebo lakho lokumaketha okuqukethwe. Ungakwazi ukubona kalula amathrendi akamuva kokuqukethwe futhi usebenzise ithuluzi lokukhiqiza imibono.
Ngesu elihle lokumaketha okuqukethwe, wakha ukwethembana nezithameli zakho, uxhumane namathemba namakhasimende, ukhiqize umkhondo, futhi uthuthukise ukuguqulwa. Ukungaguquguquki kokuqukethwe kusiza inkampani yakho ukuthi yethembeke kakhudlwana, kwakha ukwethenjwa kumakhasimende, futhi kuqinisa isithunzi sebhizinisi lakho.
ukuqhutshwa komsebenzi 6: Marketing Campaign Management
Uma inkampani yakho ithola imikhondo embalwa futhi ukuthengisa kwehlile, umkhankaso wokumaketha ungasebenza izimanga. Umkhankaso omuhle wokumaketha ungavusa intshisekelo entsha ebhizinisini lakho futhi uthuthukise ukuthengisa. Kodwa-ke, umkhankaso oyimpumelelo kufanele ube nemiphumela elinganisekayo–njengokwanda kokuthengisa noma imibuzo eminingi yebhizinisi.
Ukuphathwa komkhankaso wokumaketha kubandakanya ukuhlela ngokucophelela nokwenza imisebenzi ehloselwe ukuletha imiphumela emihle yebhizinisi. Iqinisekisa ukuthi umkhankaso uguqula izinjongo zenkampani zibe izinhloso ezisebenzisekayo ezihlobene nezidingo zamakhasimende.
I-automation yokuphatha umkhankaso wokumaketha yenza umsebenzi womdayisi ube lula. Isibonelo, umdayisi angakwazi ukuzenzela ukugeleza komthofu. Uma umuntu othembayo egcwalisa ifomu, ukulandelana kwemizamo yokumaketha kuyaqaliswa. Ama-imeyili angathunyelwa ngokuzenzakalelayo ukuze akhuthaze izikhangiso, acele ibhizinisi, noma acele ukuthengiswa.
ukuqhutshwa komsebenzi 7: Ukuhlelwa Komcimbi Nokumaketha
Umcimbi wokumaketha uyisa umkhiqizo noma isevisi ngokuqondile kwabalindelwe kanye namakhasimende akhona. Kungasiza ukukhulisa ukubonakala komkhiqizo ngaphambi, phakathi, nangemuva komcimbi. Umcimbi ungasiza futhi inkampani ukuthi ikhiqize umkhondo namathuba amasha. Abakhangisi bangaphromotha umkhiqizo othile noma isici ukukhulisa ukwaneliseka kwekhasimende kukonke, ukuzibandakanya, nokugcinwa.
Kodwa wonke umcimbi wokumaketha ophumelelayo kufanele uhlelwe futhi uhlelwe kahle. Ithuluzi lokugeleza komsebenzi lingavumela abakhangisi ukuthi bazenzele yonke inqubo ngokuzenzakalelayo–kusukela ekubhaliseni, ekunyusweni komcimbi, kuye empendulweni.
Uma usebenzisa imicimbi njengendawo yokumaketha, unikeza amakhasimende angaba khona ukuxhumana nenkampani kuqala futhi uwasize azi ubuntu bayo, ukugxila kwayo, kanye nombono wayo.
I-Marketing Automation Inomthelela Omkhulu
Ezimakethe zomhlaba, kubalulekile ukuthi ibhizinisi lakho lihluke esixukwini. U-80% wabasebenzisi bemishini yokumaketha kubika ukunyuka kokutholwa komthofu, futhi amabhizinisi amaningi asebenzisa ubuchwepheshe ukuze enze imizamo yawo yokumaketha iphumelele kakhulu. Ukuzenzakalela kungasiza ukuphatha yonke ingxenye yomkhankaso wakho wokumaketha–kusuka ekuqaleni kuze kube sekupheleni, okwenza yonke inqubo ingabi nazihibe futhi ingabi nankinga.
Tags: ezishintshayoukumaketha kwe-imeyili okuzenzakalelayoukuhlela umcimbi okuzenzakalelayoi-automation yokuthuthukisa ukuholaukuzenzekelayo kokuzenzekelayoizibalo ezizenzakalelayo zokumakethaizibalo ezizenzakalelayo zokumakethaumkhankaso wokuzenzakalela wokukhangisaukuhamba komsebenzi wokumakethaukuphathwa kwe-ppcinjini yokusesha ezishintshayo zokumakethainjini yokusesha i-automation yokwenza ngconoukuphathwa kokuthuthukisa injini yokuseshasearch marketing managementlaphaseoezokuxhum ezishintshayo ezishintshayoizibaloyini ukuzenzekelayo kokumaketha
U-Chintan Jain unguMqondisi Ohlangene Wezokumaketha Komkhiqizo kwa I-Kissflow Workflow, inkundla ebumbene eyenza izinhlangano zilawule zonke izinhlobo zomsebenzi endaweni eyodwa. UChintan unguchwepheshe kwezokukhangisa obhala kakhulu ngezihloko ezifana nobuchwepheshe bendawo yokusebenza, ukuphathwa komsebenzi, kanye nendawo yokusebenza yedijithali. Ubuye abambe iqhaza ngenkuthalo ezinkundleni ezehlukene zezamabhizinisi nobuchwepheshe.
Hlehlisa: Ungasigcina Kanjani Ngokuzenzakalelayo Isitolo Sakho SakwaShopify noma SakwaShopify Plus